Hangari oo xeryo qaxooti ay ku oodo u sameeyneysa muhaajiriinta | Somaliska
Hangari oo xeryo qaxooti ay ku oodo u sameeyneysa muhaajiriinta
Dalka Yurubta bari ku yaala ee Hangari, ayaa mudanayaasha baarlamaanka go’aan ku gaaray in muhaajirinta dalkaas loo sameeyo xeryo laga dhiso xuduudaha luguna oodo ama lugu go’doomiyo tan iyo la baarayo codsiyadooda magangalyo doon. Go’aankaas ayaa hey’adda u doooda xuquuq ee Amnesty ku tilmaantay mid aan habooneyn oo meel uga dhacayo xaquuqda aadanaha.
Nidaamka cusub ee ay Hangariyiinta la yimaaadeen ayaa dhigaya in qaxootiga cusub ee dalkaasi iyo kuwii horey u joogay la geeyn doono xeryo lugu oodo . Xeryahaas ayaa ka sameeysnaan doona konteeynar mudda lugu gudo jira codsiyadooda qaxootinimo.
Arrimahan ayey Hangari ku sheegtay ineey ku xakameeyneeyso kooxaha mintidiinta ah ee ku soo dhex dhuumaaleeysanayo qaxootigaasi. Hase ahaatee hey’adda aadanaha ee Amnesty ayaa arrintaas soo dhaweynin. Gauri van Gulik, waa ku xigeenka madaxda Amnesty ee Midowga Yurub wuxuu sheegay in sharciga ka dhanka ah magangalyo doonka ee Hangari soo saartay yahay mid ihaano iyo bahdil ku ah mabaa’diida Midowgu aaminsan yahay ee dhowrista xaquuqda aadanaha.
Dhinaca kale Qarammadda Midoobey laanteeda qaxootiga u qaabilsan ee UNHCR, ayaa sheegtay in dib u dhac weyn ku yimid qaxootigii ku soo jabay qaradda sanadkii2015-tii, markaas oo ay soo cago dhigteen dad kor u dhaafay 177000 (boqol toddobaatan iyo toddobo kun). Sanadkii ina dhaafay ayaa Yurub waxaa yimid 29.000 (sagaal iyo labaatan kun) afar boqol oo ka mid ah dadkaas ayaa ogolaansho helay. Halka sanadkan labadiisi bilood ee ugu horeeyey la diiwaan geliyey 912 (sagaal boqol labbo iyo toban) qof oo magangalyo doon ah.
Hangari waxaa ay ka mid tahay meelaha ay ku soo jabeen qaxooti badan oo ka soo cararay dagaalka ka socda dalka Suuriya iyo meelo kale oo ka mid ah qaarada Aasiya. Hase ahaatee dalkaasi ayaa ah dal aan si wanaagan ula dhaqmin muslimiinta ka soo cararay barriga. Halka madaxda dalkasi ay sheegeen ineeysan soo dhaweeyneyn muhaajirinta muslimiinta ah balse uu dalkooda u furan yahay kuwa aan muslinka aheyn ee ka soo cararay dagaaladda ka socda Suuriya.